सुशान्तको डिलिट भएको ट्वीटमा के थियो ? त्यसैमा मृ,त्यु,को रहस्य लुकेको आशंका – Jagaran Nepal
सुशान्तको डिलिट भएको ट्वीटमा के थियो ? त्यसैमा मृ,त्यु,को रहस्य लुकेको आशंका
मुम्बइ । अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको मृ,त्यु,को मामिलाको जाँच गरिरहेको मुम्बइ पुलिसले ट्वीटरसँग ६ महिनाको रेकर्ड मागेको छ । पुलिसले सुशान्तले आफ्ना केही ट्वीट डिलिट गरेको आशंका गरेको छ ।